Famaritana manarak'endrika - Wikipedia
Amin'ny taranjan'ny kajimirindra, ny famaritana manarak'endrika (anglisy: formal specification) dia teknika mifototra amin'ny fampiasana matematika izay hahafahana mamaritra ny rafitra ary ny fandaharana. Ampiasaina amin'ny famisavisana rafitra, mamakafaka ny fitondrany, ary mamaritra ny tondrony amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana matematika mandaitra. Lazaina fa manarak'endika ny famaritana amin'ny izy io manana rariteny, miombona anaty valam-pahaizana tokana ary amin'ny fahafahana manatsoaka fampahalalana ilaina avy aminy.
Mpampandrisika[hanova | hanova ny fango]
Isaky ny faran'ny taompolo hatry ny taona 1970 dia nihanatanjaka hatrany ny rafitra ara-kajimirindra ; vokatr'izany dia mihabetsaka ny fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Noho izany dia ilaina ho tsaratsara kokoa ireo teknika mba hanampy amin'ny fandrafetana rindrankajy azo antoka. Mampiasa famakafakana matematika ho fototry ny fanamboarana ary fanekena ny endriky ny vokatra ireo injenieria amin'ny taranja maro. Anisan'ny fomba hahatongavana amin'izany amin'ny fandrafetana ny rindrankajy ny famaritana manarak'endrika. Ampiasaina matetika kokoa ireo fomba hafa toa ny fanandramana, mba hanatsara ny kalitaon'ny fango (kaody).
Ahitana hadisoana (na baogy/bug) vokatry ny fanaovana ny fanandramana. Tsara ny mahita izany mialoha satria raha efa nandroso lavitra ny tetikasa anefa misy hadisoana, dia ho lafo kokoa ny manitsy izany hadisoana izany. Ny ilàna ny famaritana manarak'endrika dia manakely ny fipoiran'izany karazan-kadisoana izany. Atao amin'ny alalan'ny fanesorana ireo fiolakolahana na famaritana ny zavatra ilain'ny rafitra izany. Amin'ny alalan'ny famaritana manarak'endrika dia voatery mamakafaka lalina ny rafitra ary ny tetikasa ireo mpandrafitra. Hampiseho ny hadisoana na fiolakolahana izay misy anaty famaritan-drafitra tsy manarak'endrika ny famakafakana ilay famakafakana. Vokatr'izay famakafakana izay dia ho kely kokoa ny fetezan'ireo hadisoana mipoitra anaty rafitra haro. Manakana ny fanitsiana lafo vidy ny fanitsiana ireo karazana hadisoana ireo am-pitombohana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Famaritana_manarak%27endrika&oldid=690885"
Voaova farany tamin'ny 25 Oktobra 2013 amin'ny 17:39 ity pejy ity